Uncategorized Archives - News20 Media
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रमाथि लाग्यो यस्तो गम्भीर आरोप, प्रमाणित भए के होला ?
July 26, 2021 N20LeaveaComment on प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रमाथि लाग्यो यस्तो गम्भीर आरोप, प्रमाणित भए के होला ?
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले अदालत र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् । अदालतमा विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप भएकै कारण सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँने परमादेश जारी गरेको ठोकुवा गरेका हुन् । संविधानमा व्यवस्थानै नगरेको कुरालाई आदालतले फैसला गरेको र यो पुरै विदेशी शक्तिको डिजाइनमा भएको विजुक्छको दावी छ । ओटीभी […]
माधव नेपालको घरमै पुगेर प्रचण्डले किन भने तपाईको भाषणको त्यो डाइलग मलाई साह्रै मन पर्यो ?
July 24, 2021 N20LeaveaComment on माधव नेपालको घरमै पुगेर प्रचण्डले किन भने तपाईको भाषणको त्यो डाइलग मलाई साह्रै मन पर्यो ?
देउवा ,माधव र प्रचण्डबीच भयो यस्तो बोल्ड सहमती,अब के गर्लान ओली ?
July 20, 2021 July 20, 2021 N20LeaveaComment on देउवा ,माधव र प्रचण्डबीच भयो यस्तो बोल्ड सहमती,अब के गर्लान ओली ?
कांग्रेस सभापती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारलाई झड्का लाग्ने निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । वर्तमान देउवा सरकारले ओली सरकारले गत जेठ ८ यता गरेका सबै नियुक्ति वर्तमान सरकारले खारेज गर्ने तयारी गरेका हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आज […]
July 8, 2021 July 8, 2021 N20LeaveaComment on माधव नेपालको प्रस्ताव सुरेन्द्र पाण्डे सहित पाँच नेताले गरे ठाडै अस्वीकार
एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकता कायम राख्न हदैसम्मको लचकतासहित अपिल जारी गर्नुभएपछि माधव तनावमा पर्नुभएको छ । अध्यक्ष ओलीले २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा पार्टी संरचना कायम गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । अध्यक्ष ओलीको सो घोषणालाई एमाले पंक्तिले स्वागत गरेको छ । तर नेता नेपाल भने सो घोषणालाई पनि षडयन्त्र भन्दै […]
July 4, 2021 N20LeaveaComment on छोराले विदेशमा राम्रो काम नपाएपछि बुवाले गोली हानी ‘एजेन्ट’को हत्या गरे (सहि कि गलत )
छोराले विदेशमा राम्रो काम नपाएपछि उनका बुवाले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने ‘एजेन्ट’लाई योजना बनाएरै गोली हानी ह त्या गरेका छन्। कपिलवस्तु कृष्णनगर नगरपालिका-१० का ५५ वर्षीय पारस पुरीलाई गोली हानी ह त्या गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। विजयनगर गाउँपालिका-१ का ५० वर्षीय पशुपति कुर्मीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनलाई कपिलवस्तु नगरपालिका-१० नेपाल-भारत सिमाबाट […]
लाजशम पचेको तथा कांग्रेसको पछि कुद्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त : प्रधानमन्त्री ओली
June 28, 2021 N20LeaveaComment on लाजशम पचेको तथा कांग्रेसको पछि कुद्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं। एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमालेबाट निष्काशित नेता माधव नेपालप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई लाजशम पचेको तथा कांग्रेसको पछि कुद्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। सोमबार मदन भण्डारीको ७० औ जन्मजयन्तीको अवसरमा बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले आफ्नो सरकार ढाल्ने र कम्युनिष्ट आन्दोलन सिध्याउने भन्दै नेपाललाई ‘लाजशरम पचेको […]
ओलीको बोली भारतभर एकाएक भाइरल बनेपछि प्रधानमन्त्री दंग, त्यस्तो के बोलेका थिए ? हेर्नुस्
June 22, 2021 June 22, 2021 N20LeaveaComment on ओलीको बोली भारतभर एकाएक भाइरल बनेपछि प्रधानमन्त्री दंग, त्यस्तो के बोलेका थिए ? हेर्नुस्
अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमवार दिएको अभिव्यक्तिले भारतसम्मै चर्चा पाएको छ । उक्त कुरा भारतभर भाइरल बनेको छ । ओलीले योग दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै योगको उत्पत्ति नेपालमा भएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीलाई बीबीसी हिन्दीले ट्विटरमा राखेको छ । ट्विटरमा राख्दै बीबीसी हिन्दीले लेखेको छ, ‘नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले […]
म आफू पनि भ्रष्ट्राचार गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न
June 21, 2021 N20LeaveaComment on म आफू पनि भ्रष्ट्राचार गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अरगरियाले पशुपति क्षेत्रभित्रका सम्पदा पुनःनिर्माण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिएका छन् । आइतवार पशुपति क्षेत्रभित्र निर्माण गर्न लागिएको राममन्दिरको शिल्यान्यास गर्दै मन्त्री अरगरियाले पशुपति क्षेत्र भित्रका पुनः निर्माणका कामहरुलाई पारदर्शी रुपले गर्नका लागि निर्देशन दिएका हुन् । उनले आफू पनि नखाने र अरुलाई पनि खान नदिने […]
सबै नेताहरू मुलुकलाई निकास दिन असफल भए अब निकासका लागि सैनिक शासन चाहियो, सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डा घेरौं !
June 20, 2021 N20LeaveaComment on सबै नेताहरू मुलुकलाई निकास दिन असफल भए अब निकासका लागि सैनिक शासन चाहियो, सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डा घेरौं !
मुलुकमा मैले बारम्बार सैनिक शासनको माग गरिरहेको छु । कमेन्टमा कतिपयले सेनाहरुको विरोध गरेको देख्दछु । कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीमा लासको व्यवस्थापन गर्ने सेनाहरु । मलामी सेनाहरु । मुलुकमा आपत विपत पर्दा संकटको घडीमा साथ दिने सेनाहरु । सेनाहरुलाई मेरो सलाम छ । अब न्यायालय समेत न्यायाधीश फेरबदल गर्ने रोग लाग्न गएको छ । न्यायालयमा […]
अन्ततः ठेगान लागे ओली, एमाले संसदीय दलको नेतामा नेम्बाङ , प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी !
June 20, 2021 N20LeaveaComment on अन्ततः ठेगान लागे ओली, एमाले संसदीय दलको नेतामा नेम्बाङ , प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी !
काठमाडौँ । दुई खेमामा विभक्त एमालेको विवाद मिलाउन पार्टीका दोस्रो तहमा देखिएका नेताहरू लागि परे पनि निचोड निकाल्न सकेका छैनन् । उनीहरूले पछिल्लो समय मध्यमार्गी धार निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । हुनत, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकटकाहरूले अबको केही दिनमा मिल्न नसकेको खण्डमा यो विषयमा छलफल नै नहुने बताइरहेका छन् । ‘छलफल चलिरहेको छ […]